my kitchen my life: ကျွန်တော်နှင့် yeast
yeast- yeast isafrom of plant or microscopic plant belonging to fungi family. yeast is used as raising agaent for baking bread.
ရီးစ် လို့ခေါ်ပြီး fungi ခေါ် မိူအမျိုးအနွယ်ဝင် ၊ ပိုးရှင် တမျိုးဖြစ်သည်။ ရီးစ်ကို ထည့်ခြင်းအားဖြင့် မုန့် သား ကို ပွတတ်စေပါသည်။ beer yeast > barking yeast > wine yeast စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း အဓိကအားဖြင့် နှစ်ပိုင်း ခွဲထားနိုင်သည်။ အစို နှင့် အခြောက် ဟူ၍။ အရည်အသွေးကို ကောင်းမကောင်းကို အရောင် နှင့် အနံ့ စမ်းသပ်ပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ နို့နစ်ရောင် ၊ ပန်းသီးမှည့်ရောင် ရှိသော ရီးစ် မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဟု ကြားဖူးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိသုံးနေသော pizza အတွက် ရီစ် မှာ အလက်စား ရီးစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြူရော်ရော်နှင့် ထိလိုက်လျှင် ကြေသွားပါသည်။ yeast should be stored inarefrigerator ( 32'F - 45'F ) which can be used foralong period .
Posted by leo mark at 9:08 PM